SomaliaReport: Madaxa Gargaarka UN-ta:Ka Digaya Dhib kororka
“Roobabka la waayey dartood ayaan aad uga walwalsanaay inay Soomaaliya gali doonto heer cusub oo burbur baniaadannimo ah”. Wuxuu intaa sii raaciyey in laga walwalsan yahay in dadka kaalmada u baahan doona ay sii kordhaan”.
Bowden ayaa sheegay inaysan UN-tu haysan taakulayn ku filan oo ay ku daboosho baahida jirta, balse wuxuu wacad ku maray inuu garab istaagi doono dawladda Soomaaliyeed.
Madaxa UN-ta u qaabilsan gargaarka Soomaaliya, Bowden, ayaa wargayska Somalia Report u sheegay inay kaalmooyinkii ay UN.tu heli jirtay hoos u dhac ku yimid kuwaas oo ay sababeen hos u dhaca guud eek u yimid dhaqaalaha dunida, cagajiid ka yimid hay’aadkii kaalmooyinka bixin jiray iyo qawaaniinta ka ortagga argagixisada oo ku keenay inay dawladda maraykanka oo ahayd kaalmo-bixiyaha koowaad ay noqoto midda toddobaad. UN-ta ayaa u qoondaysya sanadkan inay hawlgalada Soomaaliya ku kaalmayn donto miisaaniyad dhan 529 milyan, balse waxaa soo gaadhay oo kaliya 145 milyan badhtamihii bishii Apriil.
Roobab ka curtay gayiga Soomaaliya ayaa keenay rajooyin aan badnayn iyo nafis yar ka dib abaaro muddo badan jiray, waxaase jirta in walaac ku wajahan sida ay biyahani ugu filnaan doonaan beeralayda uguna saamixi doonaan inay dhamaantood dalaggooda beertaan.